Vaovao - Kapila fikosoham-bary diamondra ho an'ny fikosoham-bary, Terrazzo, Vato ambonin'ny tany
Ny fanazavana matihanina momba ny diamondra fitotoana kapila dia manondro ny fitaovana fikosoham-bary ampiasaina amin'ny milina fikosoham-bary, izay ahitana vatana kapila sy fizarana diamondra. Ny ampahany amin'ny diamondra dia welded na voapetaka amin'ny vatan'ny kapila, ary ny faritra miasa toy ny gorodona vita amin'ny simenitra sy vato dia voaporitra tsara amin'ny alàlan'ny fihodinana haingam-pandeha.
Noho ny toetra mampiavaka ny diamondra abrasives dia lasa fitaovana tsara indrindra ho an'ny fikosoham-bary mafy sy ny gorodona. Tsy vitan'ny hoe fahaiza-manao avo lenta izy ireo, avo lenta tsara, fa koa manana roughness tsara, fanjifana abrasive ambany, ary fiainana maharitra. Afaka manatsara ny fepetran'ny asa koa izany.
Diamondra fikosoham-bary dia matetika ampiasaina amin'ny famolahana marbra, granita, seramika, vato artifisialy, sns., indrindra ho an'ny fanorenana rindrina ivelany simenitra amin'ny haingon-trano, leveling eo an-toerana ny gorodona sy ny takelaka haingon-trano marbra sy granita. Izy io dia manana tombony amin'ny hafainganam-pandehan'ny fitotoana haingana sy ny fiainana lava.
Ity ambany ity ny iray amin'ireo takelaka diamondra fikosoham-bary mahazatra indrindra, mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny loha tokana 250mm gorodona (Blasrac BGP-250 sy BGS-250 / Norton Clipper GC250 / DFG 400 / TCG 250), amin'ny ankapobeny dia weld 20 pcs 40 * 10 * 10mm faritra mahitsizoro, raha mila endrika na isa fizarana hafa, dia afaka ampanjifaina fototra amin'ny fangatahana. Grits 6#~300# dia misy. Fatorana malefaka, fatorana antonony, fatorana mafy dia azo atao mba hifanaraka amin'ny gorodona mafy samihafa. Izy ireo no tena ampiasaina amin'ny fitotoana simenitra, terrazzo sy ny vato ambonin'ny, koa azo ampiasaina amin'ny epoxy, lakaoly, loko fanesorana.
Ity manaraka ity dia endrika hafa amin'ny takelaka fikosoham-bary diamondra ho anao.
Ankoatra ny kapila fikosoham-bary diamondra, dia mpanamboatra fitaovana diamondra rehetra ihany koa izahay, toy ny kiraro fikosoham-bary diamondra, kodiaran'ny kaopy diamondra, diamondra fanosotra pads, fitaovana fikosoham-bary pcd sns. Tongasoa eto amin'ny fanontanianao.